रुट प्रमीट विनै जाजरकोट–डोल्पा सडकमा मनपरी भाडा असुल्दै – Rara Khabar
रुट प्रमीट विनै जाजरकोट–डोल्पा सडकमा मनपरी भाडा असुल्दै
जाजरकोट ८, भदौ
जाजरकोट डोल्पा सडकको त्रिबेणीसम्मको कच्ची सडक खण्डमा जीव लगाएत यातायातका साधन संचालनमा छन् । जाजरकोट खलंगादेखि रुकुमहु“दै डोल्पा सिमाना त्रिबेणीसम्मको खण्डमा यातायात सेवा संचालनका लागि अनुमती भने छैन । तर ब्यबशायीले उक्त सडक खण्डमा मनपरी भाडा अशुल्दै जबरजस्तीजीव सेवा संचालन गरेका हुन् ।
ब्यबशायीले सडकको ७६ किलोमीटर दुरीमा १ हजार ४ सय ५० भाडा अशुल्ने गरेका छन् । सडकमा रुटपरमिटको अनुमती विना यातायात संचालनमा आएका छन । त्यसैमा मनपरी भाडा दर प्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन । सडकमा न कानुनी बैद्यता गरेका सवारी साधन नत अनुमती पत्र प्राप्त गरेका चालक नै छन । यस सडक खण्डमा ५ सिट क्षमताका जीवलाई मापदण्ड विपरित मोडीफाईड गरेर १४ सिटे बनाएर यातायात संचालन गरेर संन्चालन गरेका रग्दाका जंगबहादुर रावतले बताए ।
मापदण्ड विपरितका तीन दर्जन बढी जीव संन्चालनमा छन् । सडक विभागले जारी गरेको रट प्रमीट विनायातायात संचालन गर्न नपाउने कानुनी प्राव्धान छ तर यस सडकका लागि कागजमै समित भएको छ । ब्यबशायीको चर्को भाडा र जोखिमपुर्ण यात्रा गनुपर्दा यात्रु मर्कामा पर्दै आएका छन् । रुकुम र जाजरकोट प्रशासन भने ब्यबशायीको यस्तो हर्कतको वेवास्ता गर्दै कानमा तेल हाले जस्तै छ । पुराना तथा थोत्रा र अनुमती पत्र विना चालकले चलाएका जीवमा जोखिम मोलेर यात्रा गर्नु परेको स्थानीयको गुनासो छ । ब्यबशायीले १२ जनासम्म अट्ने मापदण्ड विपरीतका अवैद्य गाडीमा ३०÷४० भन्दा वढी यात्रुहरु कोचेर जोखिम पुर्ण यात्रा गराउने गरेका छन, रावतले भने ।
कहाँ कति भाडा ?
जाजरकोटको खलंगादेखि रिम्नासम्मको १६ किलोमीटरमा २ सय ५०, रुकुमको छेपारे देखि आठविसकोट राडीजिउला सम्मको २१ किलोमिटर सडकमा ३ सय, खगेनकोटको बगारादेखि भगबतीको तल्लुबगरसम्मको २० किलोमीटरमा ३ सय ५० र गोतामको छरीबगरदेखि डोल्पाको सिमाना त्रिबेणीसम्मको २० किलोमीटरमा ५ सय ५० भाडा अशुल्दै आएका छन ।
सरकारले देश भर विना रुटपरमीट सवारी साधन चलाउन रोक लगाएको छ तर यस सडकमा राज्यको आँखा कहिले पुग्ला ? यस सडकका ब्यबशायीले सिट क्षमताभन्दा वढी यात्रु कोचाकोच गर्ने र भाडामा ब्रमलुट मचाउने गरेको सर्व साधारण जनाएका छन । कतिपय ब्यबशायीले यात्रसुलाई दुब्यबहार समेत गर्ने गरेका छन् । सडक क्षेत्रको रिम्ना, राडी, मैदे, चौखा र गोतामकोट छरीबगरमा प्रहरी चौकी छन । तर यसमा कुनै चासो नदेखाएको खगेनकोट २ का बीरबहादुर खड्काले बताए ।
रुट परमीट नभएका सडकमा गाडी संचालनमा रोक
जाजरकोट – डोल्पा सडकको खगेनकोटको बगरा हुँदै भगवतीको तल्लुबगरसम्मको खण्डमा संचालन हुदै आएका १२ जीव र ५ ट्याक्टरलाई बुधवार देखि चलाउन रोक लगाएको जाजरकोट प्रहरीले जनाएको छ । विभागको अस्थायी अनुमती समेत नभएको उक्त कच्ची सडकमा ब्यबशायीले ५ बर्ष देखि यातायातका साधन संचालन गरेर मनपरी भाडा अशुल्दै आएका थिए । स्थानीयको ब्यापक गुनासोको आएपछि अवैद्य रुपमा संचालनमा आएका साधनमा रोक लगाएको प्रहरी निरीक्षक हिक्मत बोहराले बताए ।
सडकको बगरा हुदै तल्लुबगर खण्डमा भेरी गंगा ब्यबशायी समिति, सिस्ने हिमाल ब्यबशायी समिति र रुकुम प्रालिका जीव तथा ट्याकटर संचालन हुदै आएका थिए । ती ब्यबशायीले २२ किलोमीटर दुरीको उक्त खण्डमा ४ सय भाडा अशुल्दै आएका थिए । विभागबाट अस्थायी रुट प्रमीट भएपनि नल्याएसम्म यातायातका साधन संचालन हुन नदिने बोहरो बताए । निर्माण तथा खाद्य सामग्री बोक्ने ट्याक्टरले समेत ३०÷३५ जना यात्रुलाई जोखिमपुर्ण तवरले चढाउने गर्दा पनि समस्या भएको थियो । यस सडक खण्डमा पटक पटक दुर्घटना हुदा २ यात्रुको मृत्यु हुनुको साथै डेड् दर्जन घाईते भएको थिए । विभागको अनुमती विना नै यातायात संचालन भएपनि यात्रुलाई त सुविधा भएको थियो । तर बढ्दो जोखिम र यात्रुको सुरक्षा लगाएत नहुने देखिए पछि गुनासो बढेको प्रहरीले जनाएको छ ।
जिल्लाका आधा दर्जन मौसमी सडकमा अनुमती विना नै यातायातका साधन संचालन हुने गरेका छन् । जाजरकोट – डोल्पा सडककै रुकुमको छेपारे राडीजिउला र छहरी त्रिबेणी खण्डमा भने विभागको अनुमती विना नै यातायातका साधन संचालनमा आएका छन । त्यस खण्मा ब्यबशायीले चर्को भाडा अशुल्दै आएका छन, तर रुकुम प्रशासन भने मौन रहेको छ । बुधबारदेखि खलंगा रिम्ना खण्डमा पनि ब्यबशायीले मनपरी लिने गरेको भाडादरमा घटेको छ । विभागले छिन्चु जाजरकोट सडकमा स्थायी रुट प्रमीट र खलंगा रिम्ना तथा खलंगा थलह सडकमा अस्थायी रुट प्रमीट दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जर्नादन गौतमले बताए ।
प्रकाशित मितिः ९ भाद्र २०७३, बिहीबार १०:४८